🥇 ▷ - ▷ OnePlus 7T iyo 7T daboolida go'an ee la safeeyay waxay xaqiijinayaan qaabeynta »- ✅
– ▷ OnePlus 7T iyo 7T daboolida go’an ee la safeeyay waxay xaqiijinayaan qaabeynta »-
OnePlus 7T iyo 7T Pro ayaa la filayaa kulankiisii ​​ugu horreeyay bishaan oo ay weheliso shirkaddii ugu horreysay ee Smart TV. In kasta oo ay afar bilood ka hartay tan iyo markii la bilaabay halbeegyada taxanaha ah ee ‘OnePlus 7’, haddana waxay u badan tahay in shirkaddu samaynayso Isbeddelada qaar ka mid ah qaabeynta taxanaha 7T. OnePlus 7T Pro iyo 7T ayaa la filayaa inay lahaadaan naqshadaha kamaradaha kala duwan sida laga soo xigtay daadadku oo soo ifbaxay. Maanta mid kale ayaan haysannaa taasi waxay ina tusaysaa qaar daboolida dhabarka ama daboolida labada marin, oo la xaqiijinayo wixii hore u soo daadanayay marka la eego qaabeynta.
Daboolka go’an ee OnePlus 7T Pro
Sida laga soo xigtay daboolka xirmooyinka ee OnePlus 7T Pro, Qaabka cusub ayaa sii wadi doona a naqshadeyn la mid ah tii kan ka horreeyay. Tan macnaheedu waa qaabeynta kaameeraha waxaa si habeysan loogu abaabuli doonaa guri qaab kiniin ah.
Sawirada labo kiis oo loogu talagalay Moodeelka Pro, Kiiska Karbon Bumper iyo kiiska nuuradda miinooyinka. Labada moodalba waxay muujinayaan in mustaqbalka “Pro” moodelku uu dhammaan badhamadiisa u qaybin doono isla sidii kuwii ka horreeyay. Sidoo kale waa inuu jiraa korkiisa ugu sarreeya oo loogu talagalay kamarad wax soosaara.
Cover of asalka 7 Pro
Dhanka guryaha kamarad, waxay umuuqataa taasi Waxaa jira ku darid cusub oo qaabeynta ah. The OnePlus 7 Pro wuxuu la socdaa kaamirooyin saddex-laab ah oo dhabarka ah oo ay la socdaan Flash flash. Laakiin goynta dheeriga ah dhinaca qaabka cusub ayaa ah tilmaame tilmaamaya in OnePlus 7T Pro wuxuu soo saari doonaa qalabka 3D ToF si aad u hesho macluumaad qoto dheer. Qaabeynta harsan waa inay la mid noqotaa kuwii ka horreeyay, oo ay ku jiraan 48 kamaradood ugu weyn, muraayad xagal ballaadhan iyo muraayad indhaha oo toosan oo 3X ah.
Daboolka go’an ee OnePlus 7T
Waxay umuuqataa in OnePlus 7T ay lahaan doonto a dib-u-cusboonaysiinta naqshadda kamaradaha gadaal. Muuqaalka daboolka ayaa muujinaya a guryaha kamaradaha wareega, aad ayey ula mid tahay xawaaladaha ay wadaagaan shaashadda OnLeaks dhowr toddobaad ka hor. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in goobaha kamaradaha ay u badan tahay waxaa loo cusboonaysiin doonaa kaamerooyinka saddex-geeska ah.
Furayaasha ayaa leh qaab la mid ah kuwii ka horreeyay, sidaa darteed isbedelka ugu weyn ee naqshadeynta ayaa kaliya ku jirta qaabeynta kamaradaha gadaal. Wax isbedel ah lagama fileyn xagga hore, oo leh xog la mid ah tii ka horreysay.
Cover of asalka 7
Iyada oo ay weheliso isbeddelada naqshadeeyahan, moodooyinka cusub ee OnePlus 7T iyo 7T Pro ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay soo bandhigaan isbeddelada qalabka sida processor-ka cusub ee Snapdragon 855+ iyo 2K 90Hz shaashadda labada moodal.
daboolayaa halplus 7tcovers oneplus 7t oneplus qoto dheer 7t oneplus 7t proOnePlusoneplus 7toneplus 7t pro